February 5, 2020 - khitalinmedia
ရေဘ၀ဲကို အရှင်လတ်လတ်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း ရေဘ၀ဲရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ Blogger မလေး
February 5, 2020 Khitalin Media 0
နာမည်ကြီးတရုတ် live streamer တစ်ဖြစ်လဲ blogger ဖြစ်သူ ‘seaside girl Little Seven’ ဟာ လူမှုကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Kuaishou မှာ စက္ကန့် ၅၀ ကြာမြင့်တဲ့ ဗီဒီယိုကို တင်ခဲ့ပြီးနောက် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင် နာမည်ကြီး Blogger မလေး […]
စိတ်တွေအရမ်းပင်ပန်းလာတဲ့အခါ ဟန်ဆောင်ထိန်းချုပ်မထားဘဲ အားရပါးရငိုချပစ်လိုက်ပါ
ငိုတယ်ဆိုတာ ပျော့ညံ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရင်ထဲမှာစုပြုံလာတဲ့ ခံစားချက်အစိုင်အခဲတွေ အရည်ပျော်ကျလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငိုချလိုက်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တာကြောင့် ငိုချင်လာတဲ့အခါ ငိုချလိုက်ပါ၊ ဟန်ဆောင်တင်းမထားပါနဲ့။ ငိုချင်လာတဲ့အချိန်မငိုဘဲဟန်ဆောင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါ စိတ်ကိုအရမ်းပင်ပန်းစေပါတယ်။ ငိုချလိုက်တဲ့အခါဒီလိုအံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျော့နည်းသွားစေတယ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတဲ့အခါ အာရုံကြောဆုံနေရာလေးတွေတင်းကြပ်နေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပင်ပန်းခြင်းကိုခံစားရပါတယ်။ ငိုချလိုက်တဲ့အခါ အဲ့ဒီလိုတင်းကြပ်မှုတွေ ပြေလျော့သွားပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း နည်းသွားစေပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းသွားတယ် […]
ဒီေ ဆးနည်းလေး ကို သိထား ရင်ေ သ တဲ့အထိ လေမဖြတ်တော့ပါဘူး လွန် ခဲ့ တဲ့ ၉ နှစ် လောက်က နက္ခတ ရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း စာအုပ့် ကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ပြီးဖတ်တယ်။ အဲထဲမှာက ဗဟုသုတ မှတ်သား […]
လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှီလူနာအမျိုးသမီး ၁ ဦးတွေ့ရှိ
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ လပှတ်တာမွို့နယျတှငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈသံသယလူနာ ၁ ဦးတှရှေိ့သောကွောငျ့ ကုတငျ ၂၀၀ ဆေးရုံတှငျ စောငျ့ကွညျ့နရေကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါသံသယလူနာမှာ ကခငျြပွညျနယျမှ လပှတ်တာမွို့နယျသို့ရောကျရှိလာကာ ဖြားနားမှုလက်ခဏာ ပွသသောကွောငျ့ သံသယလူနာအဖွဈစောငျ့ကွညျ့ရနျ ကနျြးမာရေးဌာနသို့ကြေးရှာဘကျမှ အကွောငျးကွားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိသညျ။ “ အဲဒီအမြိုးသမီးက ကခငျြပွညျနယျဘကျကနရေောကျလာတာပါ။ ဟိုဘကျမှာလညျးသံသယရှိလို့ဆိုပွီး စဈဆေးပွီးပွီလို့ သိရတယျ။ […]
အင်္ဂါသားသ္မီး များအတွက်​ ဘဝတစ်​သက်​တာ ယတြာ အန္တရာယ်​ကင်း၍ လာဘ်​ရွှင်​ရန်​အတွက်​ ​ခ​ရေညွှန့်​ နှင့်​ ​သ​ပြေညွှန့်​ တို့ကို ဘုရား​ပန်းအိုး တွင်​ ၄င်း တံခါး​ပေါက်​ တွင်​ ၄င်း ထိုးပါ ( ၇ )ရက်​ ၁ကြိမ်​ ​ရေလဲ ​ပေးပါ ။ အိမ်​ […]
မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွား
Zawgyi မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွား ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိသီဟအောင် ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်အေးမြင့် (၃၈)နှစ်ကို ကံနိမ့်နေလို့ ယတြာချေရမယ်လို့ပြောတယ်။ ယတြာက အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း […]
သန္ဓေတားဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြား စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်လာတဲ့ ဗီဒီယိုများ
Tiktok မှာ အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက် သတိပြုစရာကောင်းတဲ့ ဗီဒီယို trend တစ်ခု ခေတ်စားနေပါတယ်။ ဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးတဲ့ ကိရိယာကို ကိုင်ထားကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာ ၄င်းတို့ ကိုင်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆေးစစ်တံကို ဖွင့်ပြီး အထဲက […]
အချိန်၆ လအ တွင်ပိုက်ဆံစုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်နိုင်သွားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြလာ တဲ့” အ သက် ၂၀ လူငယ် စုံတွဲ ”….
ယနေ့ ခေတ်မှာ အိမ်မပြောနဲ့ မြေတောင်မပိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ…တိုက်ခန်းဆိုတာကလည်း တော်ရုံအခြေခံလူတန်းစားတွေ လက်လှမ်းမီတာ မဟုတ်ပါဘူး… အိမ်ခြံမြေဆိုတာကလည်း တကယ့်ကို ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှ ဝယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်…ခုဖော်ပြမဲ့ စုံတွဲကတော့ မိဘတွေထောက်ပံ့မှုလုံးဝမပါဘဲ စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ ၆ လအတွင်း အိမ်ဝယ်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ် ပါ တယ်…. အ သက်၂၀ အရွယ် Joshua Shaw […]
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့သော်…
သင်ရဲ့ နာမည်မှာ ”M” ပါခဲ့သော် ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9+ (နာမည်မှာ ”M” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျှုိ့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ ။ (အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး) သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တတ်တယ် ။ (ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့) […]